Zeziphi Iintlobo zeeWave?
ngomphathi ku 20-10-24
I-Plain Weave yeyona ilaphu yocingo isetyenziswayo ngokulula kwaye ilula kakhulu. Intambo nganye ye-warp (ucingo oluhamba ngokuhambelana nobude belaphu) idlula ngaphezulu nangaphantsi kweengcingo ezihamba ngokungaphaya kwilaphu (gcwalisa okanye ucofe iingcingo) kwii-angles ezingama-90. Inoluhlu olubanzi kakhulu lwesicelo ...
1. Amanqaku asongekileyo: Amanqaku emigca kumphezulu womnatha wocingo ongenakucinywa. 2. Imingxunya eyaphukileyo: Iziqwenga ezininzi ezaphukileyo iingcingo kwindawo enye ukwenza umngxuma ngaphezulu. 3. Amachaphaza amdaka: Umbala utshintshiwe ngumhlwa. Amabala ombala ngaphezulu. 4. Intambo eyaphukileyo: Yaphukile ngocingo olunye. 5. Ukubuyela ngocingo: ...
Ungayilinganisa njani ingubo yelinen?
A: Ingubo yendawo ichonga indawo evulekileyo phakathi kweentambo ezifanayo. B: Ubungakanani beMesh obonwe njengenani lokuvuleka nge-intshi yomgama Ukubala kwe-Mesh kungaboniswa njengenani elipheleleyo, iqhezu, okanye amanani amabini ngaphandle kokuba loo nto ilaphu elikhethekileyo elibizwa ngokuba lilaphu lendawo - nganye ...